वैज्ञानिकले तयार गरेको खोपले बाँदर को’रोनामुक्त भएपछी, सबैमा खुशिको केहि आशा छायो ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/वैज्ञानिकले तयार गरेको खोपले बाँदर को’रोनामुक्त भएपछी, सबैमा खुशिको केहि आशा छायो !
लण्डन। बाँदरमा गरिएको कोभिड-१९ खोपको परिक्षण सफल देखिएको छ। बेलायतस्थित अक्सफर्ड यूनिभर्सिटीमा को’रोना वि’रुद्ध विकास गरिएको खोप सफल देखिएको हो। खोपको प्रारम्भिक परिणाम उत्साहजनक देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अमेरिकी तथा बेलायती वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। उक्त अनुसन्धानमा छ वटा बाँदरमा खोप दिएर परीक्षण गरिएको र त्यो को’रोना भा’इरसवि’रुद्ध प्रभावकारी देखिएको थियो।
अब मानिसमा उक्त खोपको परीक्षण हुने बताइएको छ। अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिकहरूले ती बाँदरको शरीरमा ठूलो परिमाणमा को’रोनाभा’इरस प्रवेश गराउनुअघि उक्त खोप लगाएका थिए। खोपका कारण बाँदरको शरीरमा १४ देखि २८ दिनभित्र एन्टीबडी बनेको र त्यसले को’रोना निको पारेको बताइएको छ।
अहिले विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमका खोप विकास गर्ने र परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ।